Lionel Messi oo u sheegay Manchester City shuruudda ka xigta inay helaan saxiixiisa – Gool FM
(Manchester) 16 Maajo 2021. Xiddiga kooxda kubadda cagta Barcelona ee Lionel Messi ayaa albaabada u furay ku biirista kooxda Manchester City.
Naadiga Ingiriiska ka dhisan ayaa ka mid ah kooxaha sida ugu loola xiriiriyay saxiixa Messi maadaama laacibkan bilaash lagu heli karo marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan maadaama uu idlaanayo qandaraaska uu kula jiro kooxdiisa.
Barca ayaa haatan ku jirta wada xaajood ay ku kordhineyso qandaraaska Messi, balse laacibkan ayaanan wali kala caddeyn mustaqbalkiisa halka u noqon doonta bar-dhammaadkiisa xiga.
SunSport ayaa sheegtay inuu Kabtanka Barcelona diyaar u yahay ku biiista Man City haddii uu ka helayo qandaraas 12 bilood ah oo uu ku qaadan doono 25 milyan oo gini.
Haddii ay Citizens aqbasho dalbashada Messi, waxa uu 33-jirka weerarka ka ciyaara uu noqon doonaa xiddigii ugu mushaharaadka badnaa taariikhda Premier League, balse kooxda ay leeyihiin maalqabeennada Imaaraatka ayaa ku heli karto beeca xorta oo ma jiri doonto lacag kaga baxeysa saxiixiisa.
Si kastaba ha ahaatee, mustaqbalka Messi ee Camp Nou ayaa wali lulanaya hawada maadaama aysan jirin wax is af-garad ah oo laga soo ogaaday wada xaajoodka u dhexeeya Jorge Messi (Wakiilka iyo aabbaha dhalay Leo) iyo madaxweynaha Barcelona ee Joan Laporta.